Ciidaha Xeebta Amalfi ee Talyaaniga | Wararka Safarka
Susana Garcia | | Getaways Yurub, General, Italia
Waxaan jeclaan laheyn inaan ku safro dhamaan talyaaniga oo aan ogaano meelo layaableh sida kuwa Xeebta Amalfi, qayb ka mid ah xeebta Talyaaniga oo ku taal Gacanka Salerno, ee gobolka Campania. Waxay leedahay saddex iyo toban degmo, kuwaas oo ka mid ah Amalfi, Atrani, Positano ama Ravello. Intaas waxaa sii dheer, aaggan oo dhan ee xeebta, iyo degmooyinkiisa, waxaa UNESCO ugu dhawaaqday inay tahay Goob Hidaha Adduunka ah iyadoo ay ugu wacan tahay quruxdeeda dabiiciga ah iyo hodantinimada dhaqameed.
Xeebtaan oo ku taal meel u dhow Naples waa suurtagal in lagu raaxeysto tuulooyin qurux badan oo badda fiiriya oo ku yaal buuraha, sidaa darteed iyagu waa kuwo aad u qurux badan. Kama daali doonno helitaanka xeebo cusub, magaalooyin leh xarumo magaalooyin duug ah oo leh soojiidasho u gaar ah iyo dhul xeebeedyo qurux badan. Ku soo dhowow Xeebta Amalfi!
1 Sida loo tago Xeebta Amalfi
2 Soo helida Jamhuuriyadda Badda Amalfi
3 Ravello, meesha ay u socdaan fanaaniintu
4 Xeebaha iyo godadka ku yaal Positano
Sida loo tago Xeebta Amalfi
Caadi ahaan, ka dadka qayb ka ah Naples, mid ka mid ah qodobada ugu fudud, waxaana badanaa lagu gaaraa bas, in kasta oo ay sidoo kale jirto suurtagalnimada in lagu raaco gaari. Kusocodka baska waxay leedahay faa iidada ah inaanan raadsaneyno dhigashada gawaarida, laakiin waa inaan helnaa dhamaan macluumaadka jadwalka iyo jidadka goobta macluumaadka dalxiiska. Haddii aan baabuur ku raacno waxaan heleynaa xorriyad aad u badan, laakiin baarkinku aad ayuu ugu yar yahay magaalooyinkan yar, haddii aan helnona waxay noqon kartaa meel loogu talogalay hudheelada ama laga soo dejinayo, iyadoo aad dalxiis u ah, waxaan hubaal ahaan u heli doonnaa ganaax hadaan gaariga uga tagno meesha aanan aheyn.
Barta macluumaadka dalxiiska waxaan sidoo kale ka soo ururin karnaa macluumaadka ku saabsan doomaha, maaddaama mararka qaarkood ay tahay habka ugu dhaqsaha badan uguna fudud ee magaalo magaalo looga aado. Waa wax ka badan inta lagula taliyay kuwa si fudud u dawakhsan, maxaa yeelay waddooyinka soo gala magaalooyinkan waxay ku yaalaan buuro dhaadheer, oo leh aragtiyo aan caadi ahayn laakiin ay ka buuxaan qalooca, sidaa darteed qof kastaa kuma raaxaysan doono muuqaalka.
Soo helida Jamhuuriyadda Badda Amalfi
Shaki la'aan tani waa degmada ugu caansan uguna xiisaha badan xeebta Amalfi. Halyeeygu wuxuu leeyahay waa Hercules laftiisa oo aasaasay magaalada hadiyad ahaan amiirad oo sida muuqata leh indho qurux badan oo buluug ah sida badda xeebta. Tani waa mid magaalada ku taal dooxada, inta udhaxeysa laba buurood. Waxaan imaaneynaa barxada bartamaha magaalada, ee ku xigta dekedda, halkanna waxaan ka booqan karnaa jidadka cidhiidhiga ah ee magaalada, waxaan ku cabbi karnaa cabitaanno caadi ah, oo ah mid ka mid barxadaha barxadaha. Waxaan soo geli doonnaa Amalfi oo waxaan raaci doonnaa wadada weyn waxaan gaari doonnaa jaranjarada cathedral-ka. In kasta oo ay jiraan jidad waaweyn, oo aad u camiran, haddana sidoo kale waa waayo-aragnimo weyn in la soo galo waddooyinka yar yar, oo leh dukaamo farshaxanno iyo geeso badan oo dhab ah.
Ravello, meesha ay u socdaan fanaaniintu
Meel u dhow Amalfi waxaan ka helaynaa Ravello, oo had iyo jeer loo tixgeliyo meel ka sii saraysa, halkaas oo dadkii talyaaniga ahaa ay ku lahaayeen villa iyo guryo waaweyn oo leh beero qurux badan oo badda fiiriya. Tani sidoo kale waa qaddar oo ay doorteen fanaaniin badan fasaxyadooda, sida muusikiiste Wagner, ranjiilaha Miró, atariishooyinka Ingrid Bergman iyo Greta Garbo ama miiska Virgina Woolf. Farshaxanno ku dhiirrigeliyay muuqaalka quruxda badan, villa-yada quruxda badan ee gobnimada ama jardiinooyinka gacmeed ee wali sii wada yaabka dalxiisayaasha ku haray Ravello maanta.
Magaaladaan xeebta ku taal waxaa macquul ah in lagu arko meelo waaweyn, sida Duomo, booqashada ugu weyn, laga bilaabo qarnigii XNUMXaad, oo leh albaab laga soo galo naxaas oo qurux badan. Sidoo kale mudan in la arko waa Villa Rufolo oo leh qurxinta Moorish-ku-saameeyay iyo beer caan ah. Muhiimad kale ayaa ah in lagu cabo barxadaha baararka ugu qabow halka aan ku raaxeysaneyno aragtida badda.
Xeebaha iyo godadka ku yaal Positano
Positano waa meel kale oo xeebeed loo maro oo cirka ka eegaysa badda. Xeebaha magaalada waxaad ka arkeysaa meel ay u muuqdaan inay guryuhu buuro ka buuxaan. Si aan ugu soo wareegno Positano waa inaan qaab ahaan ahaano, sida ay jiraan boqollaal tallaabo si loo gaaro qaybaha ugu sarreeya. Playa Grande waa midka ugu mashquulka badan, sidoo kale waxay leedahay xeebta Fornillo, halkaas oo aad ku baari karto qorax iyo ku raaxeysan karto aragtida ugu wanaagsan ee magaalada.
Waxa kale oo jira booqashooyin dhaqameed, sida Kaniisada Santa María Assunta, oo leh Madonna madow laga bilaabo qarnigii XNUMXaad. Khibrad aad u fiican ayaa laga cunteeyaa god, ku Makhaayada Da Adolfo, taas oo lagu galo doon oo aan qiimaheedu aad u sareeyn, iyadoo la tixgelinayo in Positano uu leeyahay hoyga ugu qaalisan aaggan xeebta ah. Waxaana sidoo kale si aad ah loogu talinayaa in la booqdo magaalada Nocelle, halkaas oo ay ka jiraan aragtiyo cajaa'ib leh oo laga helo xeebta, in kasta oo ay tahay inaan soconno, markaa waa inaan qaab ahaan ahaannaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » Ciidaha Xeebta Amalfi ee Talyaaniga